मेगन म्याक्सवेल: उनीहरुको मजा लिनको लागि उत्तम पुस्तक | वर्तमान साहित्य
मेगन म्याक्सवेल एक स्पेनिश लेखक हुन् जुन रोमान्स र ईरोटिकामा विशेषज्ञ छिन्। यद्यपि उनले बच्चाको कथा जस्ता अर्को साहित्य शैलीमा पनि आफ्नो पहिलो चरणहरू बनाए। विश्व प्रसिद्ध, उनी किताबको श्रृंखलाका लागि राम्ररी परिचित छन् मलाई Ask० शेड्स अफ ग्रेको शैलीमा तपाईलाई के चाहानुहुन्छ सोध्नुहोस्। उनको श्रेय उहाँसँग लेखकको पुस्तकहरु को एक ठूलो संग्रह छ तर, मेगन मैक्सवेल द्वारा, सबै भन्दा राम्रा पुस्तकहरु रोमान्टिक छन् (केहि बाहेक कामुक अधिक जान्छन्)।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने उनका सब भन्दा राम्रा पुस्तकहरू मेगन म्याक्सवेलको बारेमा बढि जान्नुहोस्। र मेगनको कलमको विशेषताहरु, त्यसो भए तपाईले उनलाई अझ राम्ररी चिन्न सक्नुहुनेछ।
1 मेगन म्याक्सवेल को हो?
2 मेगन म्याक्सवेल कलम सुविधाहरू
3 मेगन म्याक्सवेल: लेखकको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
3.1 मलाई जे सोध्नुहोस् मलाई सोध्नुहोस्
3.2 इच्छा प्रदान गरियो
3.3 नमस्ते तपाईंले मलाई याद गर्नुभयो?
3.4 रातो आड़ू
3.5 क्लब मा स्वागत छ
मेगन म्याक्सवेल को हो?
तपाईंले मेगन म्याक्सवेलको बारेमा पहिलो कुरा जान्नुपर्दछ, त्यो यो "विदेशी" नामको बाबजुद, उहाँ वास्तवमा एक स्पेनिश महिला हुनुहुन्छ। वा हामी आधा स्पेनिश भन्नु पर्छ, किनभने उसको बुबा विदेशी हो। को मेगन म्याक्सवेलको वास्तविक नाम मारिया डेल कार्मेन रोड्रिगिज डेल इलामो लाजारो हो उहाँ १ 1965 .XNUMX मा जर्मनीको न्युरेमबर्गमा जन्मनुभएको थियो। उनकी आमा टोलेडोकी हुनुहुन्छ र उनका बुबा अमेरिकी हुनुहुन्छ। उहाँ जन्मनुभएको थियो र उहाँ छोटो समयको लागि जर्मनीमा बस्नुभयो उहाँ आफ्नो आमासँग बस्न म्याड्रिड जानु अघि। उनको जागिरको लेखनको साथ केही सरोकार थिएन, तर कानुनी कार्यालयमा सेक्रेटरी थियो।
यद्यपि, जब उनका छोरा बिरामी भए, उनले उनलाई हेरचाह गर्न उनले आफूलाई छोड्ने निर्णय गरे र यसैले उपन्यास लेख्न थाले। आफ्नो जीवनबाट अलिकता बिच्छेदन गर्न सक्षम हुन। त्यहीं छद्म नाम मेगन म्याक्सवेलको जन्म भएको थियो। त्यस समयमा उनले अनलाइन साहित्य पाठ्यक्रममा भर्ना गरिसकेकी र शिक्षिका पनि जो एक सम्पादक थिए उनले २०० in मा उनको पहिलो उपन्यास "मैले तिमीलाई भनें" प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे।
मेगन म्याक्सवेल फोरमको वरिपरि धेरै सरेका छन् र यसका लागि उनका अनुयायीहरूको ठूलो फौज छ, जसलाई उनी "वारियर्स र वारियर्स" भन्छन्, विशेष गरी उनको पुस्तक, विश ग्रान्ट, जुन २०१० बाट सम्बन्धित छ, जुन गाथाको पहिलो हो। को योद्धाहरू म्याक्सवेल, रोमान्टिक र ऐतिहासिक शैली (यो सामान्यतया लेख्ने समकालीन उपन्यासहरू र कुखुराको जराबाट गयो)।
वर्तमान मा, मेगन म्याक्सवेल लेख्न जारी राख्छिन्, र उही चरणहरू उनको छोरी स्यान्ड्रा मिरीले अनुसरण गरेका छन्। कसले आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रकाशित गरेको छ, हामी के गुमाउन सक्छौं? उनको जस्तै प्लेटिनासँग।
मेगन म्याक्सवेल कलम सुविधाहरू
मेगन म्याक्सवेल एक लेखक हुन् जसले आफ्ना पाठकहरूसँग सम्पर्क राख्छिन्। चीजहरू बताउने उसको तरिका, सामान्य भाषाको साथ, समानताका साथ चरित्रहरूको साथ र यस्तो देखिन्छ कि तपाईंले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन (वा तपाईंले ती प्रतिबिम्बित गर्नुभयो) जान्नु भयो, र परिस्थिति जुन कुनै समयमा अनुभव गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई बनाउँदछ। पाठकहरु संग एक रमाइलो पुस्तक छ।
लेखकका शब्दहरूमा, "मानव" पात्रहरू बनाउन मनपराउँदछ, जससँग एक व्यक्तिले पहिचान गर्न सक्दछ र ती वास्तविक हुन् भनेर देख्न सक्छ, यसको दोष र यसको सद्गुणहरू, र सँधै खुशीको अन्त्यको साथ। र यो म्याक्सवेलको अधिकतम हो, यो तथ्य यो हो कि रोमान्टिक र कामुक उपन्यासको सधैं एक सुखद अन्त हुनुपर्दछ।
उनका यौन दृश्यहरू, उनले लेखेका पुस्तकको प्रकारमा निर्भर गर्दै (यदि यो रोमान्टिक वा कामुक छ भने) धेरै होशियार छन् र असभ्य वा अश्लील सामग्रीमा पुग्न बिना। एक सरल र वर्णनात्मक भाषा छनौट गर्नुहोस् तर जहिले पनि एक सीमाको साथ र रोमान्टिक पक्षमा यसलाई आधारमा।
यसका अध्यायहरू धेरै लामो छैनन्, जसले पढ्न रमाईलो बनाउँदछ। यद्यपि यसको बाबजुद, तपाईं गर्व लिन सक्नुहुन्छ कि तपाईले लेख्ने पुस्तकहरू केहि घण्टामा पढिन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई लेख्ने काम पूरा हुन महिनौं लाग्न सक्दछ।
धेरै अनुयायीहरूको साथ उनका अनुयायीहरू को रूप मा, त्यहाँ लेख्न को उनको तरिका मन पराउने र नगर्ने मानिसहरू छन्। तर के केहि संग तर्क गर्न सक्दैन कि त्यो हो, उनलाई धन्यबाद, स्पेनमा रोमान्टिक र कामुक उपन्यास देखा पर्न थाले, धेरै अन्य लेखकहरूको ढोका खोल्न।
वास्तवमा, वार्नर स्टुडियोहरू आफैं, वर्सुससँगै, अहिले उनीहरूको उपन्यासहरूको फिल्म अनुकूलनमा काम गर्दैछन् मलाई सोध्नुहोस् कि तपाईंलाई के चाहिन्छ, जुन हामीले अगाडि भनेझैं ग्रेको 50० शेडको शैलीमा छ।
मेगन म्याक्सवेल: लेखकको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
लेखकले मेगन मैक्सवेलको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू छनौट गर्नु एकदमै जटिल छ, किनकि उनी आफैंले लेखेका २० भन्दा बढी शीर्षकहरू छन्। यद्यपि हामीले केहि चयनहरू गरेका छौं जुन हामी विश्वास गर्छौं कि तपाईंले याद गर्नु हुँदैन (र हामी पक्कै पनि धेरै छोड्नेछौं)। यी हुन्:
यस गाथामा वर्तमानमा books वटा पुस्तकहरू लेखिएका छन्, जुन लेखकले लेखेका थिए। मलाई सोध्नुहोस् कि तपाइँ के चाहानुहुन्छ ग्रेको 7० शेड्ससँग नजिकको सम्बन्ध छ, र यद्यपि यो विषय समान छ जस्तो देखिन्छ, सत्य यो हो कि मेगानले कथालाई उनको जमिनमा कसरी लैजाने थाहा थियो।
पहिलो पुस्तकको सारांश निम्नानुसार छ: आफ्नो बुबाको मृत्युपछि प्रतिष्ठित जर्मन व्यापारी एरिक जिम्मरम्यानले मलर कम्पनीको प्रतिनिधिमण्डलको निरीक्षण गर्न स्पेनको यात्रा गर्ने निर्णय गरे। म्याड्रिडको केन्द्रीय कार्यालयमा उनले जुडिथलाई भेट्छन् जो एक बुद्धिमती र मैत्री युवती थिइन् जसलाई उनी तुरुन्त प्रेम गर्दछन्।
जुडिथ आकर्षणको पासोमा पर्छिन् जुन जर्मनले उनलाई प्रयोग गर्‍यो र उनको यौन खेलको हिस्सा हुन स्वीकार गर्दछ, कल्पना र कामुकताले भरिएको। उहाँसँगै उनले यो सिक्नेछन् कि हामी सबैको भौंर हामीभित्र छ, र मान्छेहरू आज्ञाकारी र प्रभावशाली मा विभाजित छन् ... तर समय बित्दै जान्छ, सम्बन्ध घनिष्ठ हुन्छ र एरिकले आफ्नो गोप्य कुरा पत्ता लगाउला कि भन्ने चिन्ता लाग्न थाल्छ, जुन कुराले चिह्न लगाउँछ। सुरुवात वा अन्त्य। सम्बन्धको अन्त्य।
इच्छा प्रदान गरियो
इच्छा प्रदान गरियो:
यो पुस्तक द म्याक्सवेल योद्धाको पहिलो हो, स्कटल्याण्डमा आधारित गाथा र एक जसको लागि उनी चिनिए। कथा एक महिलामा केन्द्रित छ, तीन भाइहरू मध्ये जेठी, जसको जीवन सजिलो भएको छैन। यस कारणका लागि, उसले दृढ चरित्र बनाएको छ ताकि कुनै चीज वा कसैबाट टाढा नजाओस्।
अर्कोतर्फ, तपाईसँग हाइल्यान्डर डन्कन म्याक्रे छन्, जो फाल्कन भनेर चिनिन्छ, सबैले उनलाई पालन गरेका थिए। तर मेगनसँग चीजहरू त्यति सजिलो हुँदैन र यसले उनलाई उनको "वशमा पार्न" चुनौती दियो। वा हुनसक्छ यो अर्को तरिका हो।
नमस्ते तपाईंले मलाई याद गर्नुभयो?
नमस्कार, के तपाईंलाई सम्झना छ ...
यो उपन्यास शायद लेखकका लागि सबैभन्दा विशेष हो किनकि यसमा निश्चित परिवर्तनहरू छन्, उनको आमा बुबाको कथा। र यो यो हो कि यसमा तपाईंसँग केवल एक मात्र प्रेम कथा हुनेछैन, तर दुई। अन्य पुस्तकहरूमा जस्तै, म्याक्सवेल विगत र वर्तमानसँग दुई समानांतर कथाहरू प्रस्तुत गर्न खेल्छन्। मुख्य पात्र, अलाना, एक पत्रकार हुन् र एक रिपोर्ट गर्न न्यू योर्क जान्छन्। त्यहाँ उसले संयुक्त राज्य सेनाको पहिलो समुद्री डिभिजनका कप्तान जोएललाई भेट्छ। समस्या यो हो कि उनी उहाँबाट भाग्छन् प्रेममा पर्न सक्ने डरले र उनी पछि उनी जान्छन् किन उनले प्रेमले छोडिदिन चाहँदैनन्।
यो मेघान मैक्सवेल पाठकहरू र उनको एक उत्कृष्ट पुस्तकहरू माझ सबैभन्दा सिफारिश गरिएको कुखुरा उपन्यास हो। यसमा तपाईले दुई "केहि पागल" फोटोग्राफरहरू पाउनुहुनेछ जसले उनीहरूको स्टुडियोमा आगलागी भोग्दछन्, त्यसैले दमकलकर्मीहरू आउनु पर्छ।
ती मध्ये एक, रोड्रिगो, तिनीहरू मध्ये एक आनाको "चाहनाको वस्तु" बन्छन् र यद्यपि उनी आफ्नो प्रकारका छैनन्, उनले "स्पर्श गर्ने अधिकारको साथ" मित्रता राख्ने निर्णय गरे। समस्या तब हुन्छ जब गर्भावस्था बीचमा देखा पर्दछ र झूटले सबै चीजहरू उल्टो बनाउँदछ।
क्लब मा स्वागत छ
क्लब मा स्वागत छ...
यदि तपाईं "विनम्र" महिलाबाट थकित हुनुहुन्छ जो सधैं तिनीहरूको खुशीयालीको अन्तको सपना देख्नुहुन्छ भने, तपाईंले "क्याब्रोनास पाप फ्रन्टेरस" क्लबका सदस्यहरूलाई भेट्नु पर्दछ, महिलाहरू जो झूट र मोहमा निराश भएका छन्।
सिल्भिया, रोजा र एलिसाको प्रेममा धेरै भाग्य छैन। बिभिन्न परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा ती तीन जनाले आफ्नो कथित खुशीको विवाहित जीवनलाई तोडेका छन् र अविवाहित वा सम्बन्धविच्छेदको वैवाहिक स्थिति अपनाएका छन्। र भेनिस पनि छ। अविवाहित र बच्चाविना, दुबै उसका साथीहरूको जीवन र उनको पछिल्लो प्रेम विफलताले उनलाई देखाउँदछ कि प्रेम, पुरानो हुनुको अलावा, छिटो छ।
एक राती पार्टी गरेर र कराओकेमा मातेकोले, त्यहाँ उनीहरूलाई अन्य महिलाहरूको कथा थाहा छ, उनीहरूसँग धेरै कुरा स्पष्ट छन्:
१. प्रेम नचाहनेहरूका लागि हो।
२. अब एक योद्धा बन्न शुरू गर्न राजकुमारी हुनु हुँदैन।
Ar. आर्मर्ड मुटु र शान्त टाउको (र यदि यो "काका मोड" मा छ ... सबै राम्रो छ भने)।
They. उनीहरूले एउटा निजी क्लब स्थापना गर्नेछ ... Cabronas sin Fronteras।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » मेगन म्याक्सवेल: उनको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरु